မောဟ မျိုထား တို့လူသား ~ အလွမ်းခရီးသည်
မောဟ မျိုထား တို့လူသား
အပြင်လောကတွင် လည်းကောင်း ၊ အွန်လိုင်းပေါ်တွင်လည်းကောင်း လူတစ်ချို့၏ အတွင်းစိတ်သည် ။
ယဉ်ကျေးသလိုနှင့် ရိုင်းစိုင်းစွာ ပြောဆိုတတ်သည် ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့ဖူးလေသည် ။ ကျွန်တော်၏ စိတ်နှင့်
ဆုံးဖြတ်၍ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ။ ရိုင်းစိုင်းစွာ ပြောဆိုတတ်ခြင်းသည် ။ ပညာတတ် ခြင်း ၊ ပညာမတတ်ခြင်းနှင့်
၊ မဆိုင်ဟု မြင်မိပါသည် ။ ကျွန်တော်သည် ငယ်စဉ်ထဲက စာပေ ပညာကို ၂ တန်းသာ သင်ခဲ့ဖူးပါသည် ။
မိဘနှင့် အတူမနေခဲ့ရသလို ဆရာသမားများ၏ ၊ ဆုံးမ သွန်သင်မှုကိုလည်း နေ့စဉ်နှင့်အမျှ
ကြားနာခဲ့ရသူလည်း မဟုတ်ပါ ။ သို့ပေမယ့် ဘ၀၏ အတွေ့အကြုံ အရ ။ မည်သည့် အရာ ကောင်းသည်
ဆိုးသည်ကိုတော့ ခွဲခြားနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ လူတွေမှာ မိမိကိုကိုယ် မိမိ မြင်နိုင် သိနိုင်ဖို့ လိုပါ သည်
။လူတစ်ယောက် စည်းကမ်းရှိအောင် ပြောဆိုနေတတ်ခြင်းသည်လည်း ။မိမိစိတ်မှ ပြစ်ပေါ်စေပါသည်
သို့ပေမယ့် ။ မိမိစိတ်ကို မိမိ ပြန်လည်မမြင်မိခြင်း ပြန်လည်မသုံးသပ် မိလျှင် ။ လူသည် စည်းကမ်းမရှိ
ပျက်ဆီးတတ်ပါသည် ။ တစ်ချို့ကလည်း မိမိကိုကိုယ် မိမိ မှားမှန်းသိပေမယ့် ။ အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက်
ဆိုသလို ၊ အမှတ်မထင် ပြောဆိုနေထိုင်တတ်သည်ကို တွေ့မိပါသည် ။ ဤသည်မှာ( မောဟစိတ် ) ဖုံးလွှမ်း
နေသောကြောင့်ပင် ။ မောဟ စိတ်သည် ၊ မိမိဟုတ်မာ ညစ်ညမ်း ဆိုးသွမ်းသော အပြစ်ကိုလုပ်နေသည့်တိုင်
အပြစ်ကို အပြစ်မှန်းမသိပဲ ဖြစ်နေတတ်သည် ။ ဥပမာ ပြောရလျှင် ဤဆိုဒ်ထဲတွင် ထိုသူသည် ။ အပြော
အဆို ရိုင်းစိုင်း၏ ထိုသူသည် ညစ်ညမ်း၏ ။ ဤသူကို မိကောင်းဖခင် သားသ္မီးများ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်
နိုင်ရန် ဤ ဆိုဒ်မှ ထုတ်ပြစ်လိုက်သည် ။ ထိုသူသည် အခြားသော နာမည်နှင့် ပြန်ဝင်လာ၏ ။ မူလပုံစံ
အတိုင်း ဆဲဆို ညစ်ညမ်းလေ၏ ။ ထိုလူမျိုးတို့သည် ၊ ပညာတတ်များဖြစ်၏ ၊ ထိုသူသည် မိဘ ဆိုဆုံးမမှု
ရှိလေ၏ ။ သို့ပေမယ့် မိမိအမှားကို မိမိသိပါလျက် ။ မပြင်ဆင်ခြင်းသည် ၊ မောဟ စိတ် ဖုံးလွှမ်းနေခြင်း
ကြောင့် ဖြစ်ပါသည် ။ ဤ အမှားမျိုးပင် မောဟစိတ် ဖုံးလွှမ်းနေသလား” ။ မဟုတ်ပေ မည်သူ့ ကိစ္စမဆို
ဒီကိစ္စကို ငါလုပ်လိုက်လျင် မှားမည်ဆိုတာကိုလည်း သိသည် ၊ သိသိကြီးနှင့် ဆက်လက်လုပ်ခြင်းသည်
မောဟ စိတ် ဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည် ။ လောက၌ မိုက်မဲမှု ဟူသမျှသည် ၊ မောဟ၌ သာ အခြေ
တည်၏ ။ မောဟစိတ်ကို အမိုက်စိတ်ဟုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည် ။ မသိခြင်း တရား ကြီးစိုးနေသူကို ၊ လူမိုက်
လူအ လူနုံ လူထိုင်း လူဖျင်း လူပြိန်းဟု ခေါ်ကြသည်။ မောဟ ရှိသောသူအတွက် လောက ကြီးသည် ၊
အမှောင်အတိ ဖြစ်နေတတ်သည် ။ ကျွန်တော်တို့သည် ယခုဆိုလျှင် အွန်လိုင်းကို အသုံးပြု၍
ပညာဗဟုသုတများကို ရှာဖွေကြပါသည် ။အွန်လိုင်း အသုံး မပြုသူတွေထက်စာလျှင် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ
အမြင်ကျယ်ကြပါတယ် ။ အမြင်ကျယ်သော စကားလုံးကို ပြောင်းပြန် တွေးလိုက်ပါက အမြဲကျင်းဟု ၊
အဖြေ ပြန်ထွက်လာပါသည် ။ ဤ အဖြေသည် ၊လေ့လာစရာတွေ ပြည့်စုံနေပါလျက် အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့
နေတတ်သောသူများအတွက် ၊ အမြဲကျင်းနေသော မောဟ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ။ လေ့လာမှု
မရှိသောကြောင့် ( သို့ ) မသိသောကြောင့် ၊ မိမိ လုပ်သမျှ အမှာချည်း ဖြစ်နေတတ်၏ ၊ ဥပမာပြောရလျှင် ၊
လူတစ်ယောက်သည်ပိုစ့် တစ်ပုဒ် ၀င်ဖတ်ပါသည် ။ သူဝင်ဖတ်သော စာပေသည် တစ်ဖက်စွန်းကျစွာ
ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရှိပါသည် ။ ထို့ကြောင့် ကော်မန့်ပေးခဲ့ရာတွင် လမ်းမပြပဲ ဒေါသနှင့် ရေးခဲ့၏ ။
ထိုလူသည် စာရေး သူထက် မောဟစိတ် ပိုသွားသည် ။ စာရေးသူသည် မသိ၍ ရေးမိသည်ဟု တွေးရမည် ။
မိမိသည် ထိုသူ၏ စာပေအား အမှားအမှန် ခွဲခြားတတ်သည် ။ သို့ပေမယ့် ဒေါသနှင့် ကော်မန့်အား
ရေးပေးခဲ့သည် ။ ထိုသူ သည် ။ အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက် မောဟ ဖုံးလွှမ်းသော ပညာတတ်သူ ဖြစ်၍
သွားပါသည် ။ လူတို့သည် ချစ်အောင် ပြောသည်လည်း ဤ ပါးစပ်ဖြစ်သည် မုန်းအောင်ပြောသည်လည်း
ဤ ပါးစပ်မှ ဖြစ်သည် ။ အမှား အမှန် ဝေဖန်နိုင်သောပညာတတ် ၊ မေတ္တာစိတ်ရှိသော သူတို့သည် ။
အမှားဖြစ်နေသူ တစ်ယောက် အား ။ အမှန်သို့ ရောက်အောင် ချိုသာစွာ လမ်းပြတတ်သည် ။ မောဟစိတ်
ဖုံးလွှမ်းနေစေဦး ။ လောက၌အရာရာကို စိတ်ချမ်းသာစွာ နေလိုလျှင် မိမိစိတ်ကို ထိန်းပြီး ချိုသာစွာ
ပြောဆိုတတ်သောသူသည် ။ အောင်မြင်သောသူ ချစ်သူ ခင်သူ ပေါများသောသူ တစ်ယောက်ဖြစ်မှာ ၊
မလွဲဧကန်ပင် ဖြစ်ပါသည် ။ လူတို့သည် နေ့စဉ် လောဘကြောင့် မှားကြ၏ ။ ဒေါသကြောင့် မှားကြ၏ ။
ဤအထဲတွင် မောဟရှိသူက မသိမှုကြောင့် အချိန်သုံးပါး မှားယွင်းနေတတ်သူ ဖြစ်၏ ။ မောဟ (ခ)
မသိသောသူ၏ စိတ်သည် ၊အလုံးစုံ စည်းကမ်းမဲ့မှု ဘ၀သို့ ရောက်သွားတတ်ပါသည် ။ ထို့ကြောင့်
မောဟဆိုသော မသိမှု မရှိအောင် အသိ ပညာကို လေ့လာရပေမည် ။ အသိကို သတိနှင့် ထိန်းရပေမည် ။
တစ်ချို့ လူတို့သည် အများအပြားသိ၏ သိတော့ သိသည် သို့ပေမယ့် မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေ အများကြီး
သိနေ၍ ဘုန်းကြီးတစ္ဆေ ဖြစ်သွား၏ ဤသည်မှာ အသိကို သတိ မရှိခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည် ။ လောက၌
လူသားတို့ အတွက် စိတ်စည်းကမ်း တည်ဆောက်ရာတွင် ၊ အသိဉာဏ် ပညာသည် မောဟကို
ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည် ။ ထိုကြောင့် ပညာကို ရှာဖွေ ရမည် ။ အသိဉာဏ်ကို တည်ဆောက်ရမည် ၊ ထို့နောက်
သတိနှင့် ပြုမူ ပြောဆို နေထိုင် နိုင်ခဲ့လျှင် သူငယ်ချင်းတို့အတွက်ရော လောက ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါ
အေးချမ်းတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးအပေါ်မှာ ကံကောင်း ထောင့်မစွာ အဖိုးတန်တဲ့ လူ့ဘ၀မှာ ။
လူလာဖြစ်ရတာပါလားဟု တွေးမိပြီး ။ ထာဝရ ပျော်ရွှင် စွာဖြင့် နေထိုင် နိုင်ကြမှာပါ . . . . လူဖြစ်ပြီး
မည်သို့မှ ပြောဆို ဆုံးမမှု မရသောသူကို ။ ကျွန်တော့ကို ငယ်ငယ်က ဆရာတော်ပြောခဲ့ပါတယ် . . . . .
ရင်မောင်တဲ့ ငါပြောဆို ဆုံးမသမျှ နားမလည်နိုင်ရင် မင်းဟာ လူမဟုတ်ဘူးတဲ့ . . . . လူတော့လူပဲ လူ့
တိရစ္ဆာန် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ . . . . . . .။
စာပေ ဗဟုသုတရေးသူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို မိမိ ပြုပြင်ရင်း ၊ သူတစ်ပါးအတွက်ကိုပါ သိရှိစေရန်
ရေးသားခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည် ။ တစ်ခါက ကျွန်တော်အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေ အပြစ်ဆိုသလိုပေါ့ ။
ကိုယ်မလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ လူကြားကောင်းအောင် နာမည်ထွက်အောင်လျောက်ရေးနေတယ်လို့တော့
မပြောလိုက်ပါနဲ့ဗျာ . . . . ဤသို့ဆိုလျှင် ထိုသူသည် မောဟ (ခ) အသိတရားမရှိသောကြောင့်
သူငယ်ချင်း အားလုံးကို ချစ်ခင်လျှက် . . . . .ဂျူပီတာ ကိုရင်မောင် . . . ၂၀ . ၄ . ၂၀၁၁ .